Baahin: Isniin, 12 AUG 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Maxamed C Cali (Kooshin) ~ Daljir ~ Garowe – Radio Daljir
Agoosto 12, 2013 8:54 g 0
Garowe, August, 11, 2013 – Dhagaystayaal halkaan ka dhagaysta barnaamijkii Caawa iyo Daljir oo uu daadihinayo wariye Maxamed C/llaahi Cali ‘Kooshin’ waxaana ugu waawayn caawa qodobada uu barnaamijka kusoo qaatay.
Dr. Faroole oo cuna-qabatayn aad u daran ku tilmaamay joojinta lacagaha xawaaladaha Soomaalida ee dibada laga soo diro.
Dawladda Soomaaliya oo wax laga xummaado ku tilmaamtay go?aankii ay xukuumadda Puntland dib ugu celisay markabkii siday raashinka ee 10-kii bishaan kusoo xirtay dekada magaalada Boosaaso.
Afhayeenka issimada Punltnad Garaad C/llaahi Cali Ciid oo shaaciyay shirar dhaqan-midayn oo uga furmay magaalada Nairobi oo dalka Kenya. Soona dhaweeyay go?aankii Puntland ee xiriir kalanoqoshadii dhawaan
Baaqyada ku wajahan issimada iyo nabaddoonnada Puntland ee la xiriira xaq-soorida xulitaanka xubnaha baarlamaanka cusub ee Puntland ay yeelanayso oo aad isku soo taraya.
Madaxwayne kuxigeenka dawladda Puntland C/samad Cali Shire oo ka digay khatarta tahariibta oo si wayn looga dareemay gobollada Puntland.
Iyo qodobo halke.
Hoos ka dhagayso barnaamijkii caawa iyo daljir (Kooshin)